အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံ ရန်ကုန်မှာ အရောင်းသွက် | ဧရာဝတီ
ဧရာဝတီ| November 11, 2011 | Hits:522
3 | | ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့၏ ဓာတ်ပုံများကို ရန်ကုန်မြို့ လူစည်ကားသည့် နေရာများတွင် ရောင်းချနေကြပြီး ထိုဓာတ်ပုံများ ပုံနှိပ်၊ဖြန့်ချိ၊ ရောင်းချခြင်းမှာ အမြတ်အစွန်း များသည့် လုပ်ငန်းတခု ဖြစ်လာသည်။
ထားဝယ်အိမ်ခြံမြေများ ကျပ်သိန်း သောင်းဂဏန်းအထိ ပေးဝယ်နေ
လျှပ်စစ်မီး ပိုသုံးစွဲနိုင်ရေး ADB နှင့် ဂျပန် ကူညီမည်
76 Responses	← Older Comments
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကိုချစ်ဖေ November 13, 2011 - 8:25 pm	အာဏာသိမ်းပြီးခါစကနေ ၂၀၀၄ အဖမ်းမခံရခင်အထိ စစ်အစိုးရအပေါ်တာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့ အတိုက်အခံတွေကို စနစ်တကျဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့်ပုံ လက်ရှိ နကလ စစ်ကောင်စီမှာ ရာထူးအကြီးဆုံးအနေနဲ့ ယူထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေပုံတွေကိုလဲ ရောင်းကြည့်စေချင်ပါတယ် သူတို့ကိုထောက်ခံသူတွေလဲ ရှိတော့ ၀ယ်မှာပဲ.ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာ စမ်းကြည့် ရောင်းကြည့်စေချင်ပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ပုံကတော့ ရောင်းလို့မရနိုင်ပေမဲ့ ဗိုလ်သန်းရွှေပုံကတော့ ရောင်းလို့ရမှာပါ..
Reply	လင်းလင်း November 14, 2011 - 1:49 pm	ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်ပုံက ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီးသန်းရွှေပုံထက် ပိုရောင်းကောင်းမယ် ထင်ပါတယ်။
Reply	အပိုကြီး November 13, 2011 - 10:22 pm	ဆိုကရေးတီးအတုကို အထင်ကြီးစရာ မရှိပါ ပစောက် နဲ့ ရေး တဲ့ ပညာတတ် ဆို ပ စောက်နဲ့ရေးတဲ့ ပါးစပ် နဲ့ လုပ်စားလိုရတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလား ပစောက်နဲ့ ရေးတဲ့ ပလီပလာ များမှ မီဒီယာသမား လို ခေါ်လား
Reply	phothura November 13, 2011 - 11:09 pm	အောင်ဆန်း ဆိုတာ ဗိုလ်ချုပ်တို့ သားအဖ ကို ရည်ညွှန်းတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Reply	ဘလော့ဂါ November 14, 2011 - 12:31 am	၂ယောက်လုံးဆိုလည်းနာမည်သေချာတပ်ပြီးရေးကြပါ အောင်ဆန်းလို့ခေါ်လိုက်တာ (၂ယောက်လုံးမို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်) အင်မတန်ရင့်သီးတယ်ခံစားရတယ် လူတိုင်းမှာဂုဒ်ဒြပ်ရှိပါတယ် အထူးသဖြင့်ဗိုလ်ချုပ်မတပ်တာသူရဲ့ဂုဒ်ပုဒ်ကိုဖြုတ်ချနေသလိုပဲ ပြည်သူချစ်သောသားအဖလို့တပ်လို့လည်းရသားနဲ့လေ ဘာလို့အောင်ဆန်းလို့တပ်ရတာလဲ သူတို့နာမည်နဲ့လုပ်စားတာလည်းကြာပြီ သူတို့ဂုဒ်ပုဒ်လေးတော့လေးစားကြပါဦး စာရေးသူတို့ရေ
Reply	Dr.Soe Naing November 14, 2011 - 1:54 pm	Think Wisely…
Perhaps, they use only Family name…
Reply	Myo ko win November 14, 2011 - 2:53 pm	WHY U CALL Aung San? He our National Hero, grand Pa, who is General Aung san .
Reply	မောင်မောင် November 14, 2011 - 3:06 pm	အပေါ်က ကိုစိုးနိုင်…. မြန်မာလူမျိုးမှာ family name ဆိုတာ မရှိပါဘူး … ဒါ့ကြောင့် ဘာကို ကျွန်တော်တို့က wisely think ရမှာလဲ ဒေါက်တာ ကိုစိုးနိုင်
Reply	ဇော်မင်း November 15, 2011 - 4:27 pm	ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဧရာဝတီမှတာဝန်ရှိသူတစ်ယောက်ယောက်ကတော့ တာဝန်ယူဖြေရှင်းသင့်တယ်
Reply	ဇော်ဇော် November 16, 2011 - 5:25 pm	စိုးနိုင်
ဗမာလူမျိုးမှာ Family Name ကို တပ်တဲ့ ဓလေ့မရှိဘူးဆိုတာ သိဖို့ကောင်းတယ်။ တချို့တလေတပ်တာလောက်ပဲရှိတယ်။
Reply	James November 16, 2011 - 6:14 pm	အော်..လူတွေကလဲခက်တာပဲ
နောက်ပြီး ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ရေးတာတွေက စာကြောင်းတိုနဲ့နားလည်လွယ်အောင်ရေးကြတယ်
Reply	Sithu November 16, 2011 - 9:40 pm	james …. ခင်များ ပြောသလိုဆို အတိုခေါက် ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ ဒေါ်စု ပုံဆိုပြီးရေးလဲရတယ်။ အောင်ဆန်းလို့ ခေါ်တာ ၂ ယောက်လုံးကို စော်ကားသလိုပဲ၊ စာကြောင်းနဲနဲ ပိုရှည်တော့ ဘာဖြစ်သွားမှာမိုလို့လဲ၊ ခင်များ က ဒါကို အသေးအဖွဲ ကိစ္စလို့ထင်ရင် ခင်များ အတော်မှားသွားပြီ။ စစ်တပ်က လူတွေတောင် ဘယ်တော့မှ အလိုအသုံးအနှုန်းမသုံးဘူး။ ပြန်သူတွေကတော့ ပြောမနေနဲ့။ ခေါင်းစဉ်က စာလုံး အကြီးနဲ့ရေးတာ၊ ပိုဂရုစိုက်ရမယ်။
Reply	thiha November 17, 2011 - 7:38 pm	တာဝန်ရှိတဲ့ အယ်ဒီတာခင်ဗျား ခင်ဗျားတို့ရေးထားတဲ့ အောင်ဆန်းဆိုတာကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ပြင်ပေးစေချင်တယ် ဒါမှ မဟုတ်ရင်တော့ ကျွန်တော်အနေ့နဲ့ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးကို ဒီလိုသတင်းရေးသားထားတဲ့ပုံကို ဖွင့်ချပြတော့မယ် ပြည်သူလူထုအားလုံးကို တောင်းပန်ပါ ….ခင်ဗျားတို့တွေ လူအသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် ပြင်ပေးပါ တောင်းဆိုပါတယ်
Reply	Ryu December 24, 2011 - 2:24 pm	ဘယ်လိုပဲ ခေါင်းစဉ်တပ်တပ် သေပြီးသား လူလည်း ပြန်ရှင်မှာ မဟုတ်ဘူး.. ဘယ်သူမှလည်း မနစ်နာ သွားဘူး.. သူတို့ ရိုင်း လို့လည်း ခင်ဗျား တို့ မှာ မနစ်နာဘူး.. ကိုယ့် ထမင်း ကိုယ်စားပြီးများ.. ကြားက ၀င်နာနေသေးတယ်..
Reply	Rain January 4, 2012 - 1:35 am	မိတ်ဆွေ Ryu ….. သေတဲ့ သူ ဆို ပေ မယ့် ဗိုလ်ချုပ် က တခြား သူတွေ နဲ့ မတူ ဘူး ဆိုတာ မိတ်ဆွေ မသိသေးဘူး ဆိုရင် မိတ်ဆွေ က မြန်မာ လူမျုိုး မဖြစ် နှိင် ဘူး…။ မြန်မာစာ ရေးသားရင် ကိုယ်ရဲ့ အဓိပ္ဗာယ် က အရေး ကြီး တယ်လေ…။
Reply	ဧရာဝတီ ဘလော့ကာ June 24, 2012 - 6:52 am	ဘာဗိုလ်ချုပ်မှ မဟုတ်ဘူး။ သေနတ်ကိုင်တာ ၂ ရက်နဲ့ တပိုင်းဘဲရှိတာကို ဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်သင့်သလား။ ဒို့ ဗိုလ်သန်းရွေတို့ဗိုလ်မောင်အေးတို့ လို သေနတ် အနှစ်၃၀ ၄၀ ကျော်လောက်ကိုင်ကြည့်ပါလား။ အောင်ဆန်းဟာ အောင်ဆန်းဘဲ